के भए नवौं महाधिवेशनका १३ कार्यभार ? कहाँ चुक्यो एमाले ?
काठमाडौं । १९ असारदेखि १ साउन २०७१ मा भएको नेकपा (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीका १३ वटा कार्यभार पारित गर्यो । अध्यक्षका हैसियतमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका झलनाथ खनाल यतिवेला अर्कै पार्टीका सम्मानित नेता छन् ।
बृहत् वाम एकताको कार्यभारसहित सकिएको महाधिवेशनले पाँच वर्ष नकट्दै तत्कालीन अध्यक्ष नै पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता भइसकेका छन् ।
१३ वटा कार्यभार तय गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरेको नवौंभन्दा १०औं महाधिवेशन स्वरूपमा भने फरक छ । किनकि त्यसवेला महाविधेशनले नीति र नेतृत्व दुवै चयन गरेको थियो ।
नवौं महाविधवेशनको पार्टीको महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा ‘राष्ट्रिय हित र राज्यले प्राथमिकता पहिचान गरेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो । नेपालमा एमसीसी परियोजना विवादमा छ ।
सरकारमा हुँदा यसलाई पास गर्न प्रयास गरेको एमाले नवौं महाधिवेशनले दिएको कार्यभारविपरीत विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया र उपायबारे योजना र बोलीविहीन छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी बेग्लाबेग्लै पार्टी भएपछि मात्र एमालेले पार्टी स्कुलका गतिविधिलाई नियमित गर्न सकेको छ ।
पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न, पार्टीका कमिटीहरूमा पदोन्नति या अधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न निश्चित तहको पार्टी स्कुलमा सहभागी भएको हुनैपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्ने नवौं महाधिवेशनको कार्यभार भए पनि संस्थापनइतर समूहले अहिले पनि हचुवाको भरमा संगठीत सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।
नवौं महाधिवेशनले दिएको अर्को कार्यभार थियो– वाम मोर्चाको निर्माण र पार्टी एकीकरणका विभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट नेकपा (एमाले)लाई कम्युनिस्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने । यो कार्यभारअनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता गरिए पनि सैद्धान्तिक बहसबिना गरिएको यो एकता छिन्नभिन्न मात्र भएन, नवौं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसमेत छिन्भिन्न हुन पुग्यो ।
सौराहा । एमालेको १०औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी कसैले पनि पर्चा पम्प्लेट बाँड्न नपाउने गरी आचार संहिता जारी गरिएको थियो । तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै बन्दसत्र हल बाहिर भीम
सौराहा । एमालेको १०औं महाधिवेशन आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै समापन हुने भएको छ । सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनाउने गरी अध्यक्ष केपी ओली जुटेका छन् । अहिले ओलीसहित महासचिव ईश्वर
सौराहा । नेकपा (एमाले)को यहाँ जारी १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा सहमति हुने सम्भावना देखिएको छ । सर्वसम्मतिमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको बेला अध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन नगराउन
काठमाडौं । दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा दाबी गरेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल शनिबार दिनभरजस्तो भनिरहेका थिए कि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी छैन । बाहिर वरिष्ठ